I-4-ixesha le-Lake House eneZiko kunye neDokhi yaBucala
Wamkelekile kwiLake Mattawa! Indlu yethu enomtsalane echibini inika iimbono ezintle ukusuka kumgangatho ophakamileyo, kunye nedokhi yabucala yokutsibela kanye emanzini acwengileyo. Kwimozulu epholileyo, yonwabela umlilo kwindawo yomlilo yamatye. Indlu ikufutshane nayo yonke iWestern Massachusetts ekufuneka ibonelele ngawo onke amaxesha ama-4 onyaka-ukuhamba intaba, ukuloba, ukutyibiliza, ukutyibilika, i-antiquing & nokunye. 30 imizuzu ukusuka Amherst & Greenfield, 45 ukusuka Keene NH & Brattleboro VT, 60 ukusuka Springfield & Worcester, & 90 ukusuka Providence kunye Boston.
Le ndlu yindawo yokubuyela echibini eyakhiwe ngeminyaka yee-1950s ukusuka kwiplanga eligcinwe kwinkulungwane ye-19 kwaye ibandakanya indawo yomlilo yamatye. Indawo yomlilo isetyenziswa unyaka wonke. Igumbi lokuhlala, ikhitshi kunye nendawo yokutyela ikumgangatho wokuqala kwaye amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela liphezulu. Igumbi lokulala likakumkanikazi lifikeleleka kwigumbi lokuhlambela. Kukho umgangatho ojonge echibini kunye nedokhi yabucala ngqo ngaphaya kwesitrato ukusuka kwindlu enephenyane kunye ne-kayak. Iphenyane kunye ne-kayak ziyasebenziseka okoko ichibi lingenamkhenkce (ngokuqhelekileyo ngoAprili ukuya ngoNovemba). Ichibi ligcwele kwaye liyindawo edumileyo yabalobi basekhaya unyaka wonke. ILake Mattawa inomda we-10HP kwizikhephe, ngoko ke akukho jetskis okanye izikhitshane ezingxolayo.
4.79 ·Izimvo eziyi-162
4.79 · Izimvo eziyi-162
Le ndlu ibekwe kwindlela yasemaphandleni ehlanganiswe nomxube wezindlu zasehlotyeni kunye nonyaka wonke. Kukho unxweme oluncinci lwedolophu olungaphantsi kwesiqingatha semayile ezantsi kwendlela olulungele abantwana abancinci. IOrange Centre ingaphantsi kwemizuzu eli-10 ukusuka endlwini, kwaye kukho iindawo zokutyela, izikhululo zerhasi, iikhemesti kunye neevenkile zegrosari yonke phakathi kwemizuzu eli-15 ukusuka endlwini.
Ndimane ndifowuna xa kukho into oyifunayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Orange